Apple ရဲ့ November 10 Event အသစ်မှာ တွေ့ရမယ့် Product တွေက?? — Anycall Mobile
By liam November 4, 20202Mins Read
Apple အနေနဲ့လာမယ့် နိုဝင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့မှာသူတို့ရဲ့ One more thing event အသစ်ကိုကျင်းပလာတော့မယ်လို့ မနေ့ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ အရင် စက်တင်ဘာလ နဲ့ အောက်တိုဘာလ Event မှာ Apple Watches, iPhones, တွေနဲ့ တစ်ခြား product အသစ်တွေကိုမိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးသွားပြီမို့လို့ ဒီ Event အသစ်မှာတော့ အားလုံးစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ Apple Mac နဲ့အတူ တစ်ခြား Products အသစ်တွေကိုတွေ့လာရနိုင်ပါတယ်။
အောက်မှာတော့ မိတ်ဆက်လာနိုင်ခြေရှိတဲ့ Products တွေကိုဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
အရင်သတင်းတွေမှာ Apple အနေဲ့ သူတို့ရဲ့ပထမ ‌Apple Silicon‌ Mac ကို ၂၀၂၀ နှစ်ကုန်လောက်မှာ မိတ်ဆက်လာတော့မယ်လို့ ဖော်ပြထားခဲ့တာမို့လို့ ဒီ November Event မှာ ‌Apple Silicon‌ Macs.တွေကိုတွေ့ရဖို့က ၁၀၀ % သေချာနေပါတယ်။ Apple Silicon Chips တွေဟာဆိုရင် Apple’s iPhones ၊ iPads တွေမှာအားဖြည့်ပေးထားတဲ့ A-series chips နဲ့ဆင်ပါတယ်။ ဒီ Chips တွေဟာ Macs တွေအတွက် Performance ပိုင်းမှာပိုတိုးတက်လာစေမယ့်အပြင် အားလည်းပိုသက်သာလာစေမယ်လို့သိထားရပါတယ်။
ဒီ Apple Silicon‌ Chips ကိုပထမဆုံးသုံးလာမယ့် Mac ကတော့ MacBook Air အသစ်ဖြစ်လာမယ်လို့သိထားပါတယ်။ Air ဆိုတဲ့အတိုင်း ဈေးကလည်းသက်သက်သာသာနဲ့ ထွက်လာနိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ် 14-inch MacBook နဲ့ 24-inch iMac အသစ်တွေကိုပါတွေ့လာရနိုင်ပါတယ်။
နောက်ထပ်မိတ်ဆက်လာနိုင်တဲ့ Products တွေကတော့…
AirTags ကတော့ Apple ရဲ့ Bluetooth Trackers အသစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Bluetooth trackers ဆိုတဲ့အတိုင်း Wallets နဲ့ keys တွေမှာ အလွယ်တကူတပ်ဆင်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ဒီ ပစ္စည်းတွေပျောက်သွားရင် Phones, iPads, Macs ထဲက Find My App ကနေတစ်ဆင့်အလွယ်တကူရှာလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အရင် စက်တင်ဘာလလောက်တုန်းက Apple အနေနဲ့ “AirPods Studio” ဆိုတဲ့ High End Over-ear headphone တစ်ခုကိုပြုလုပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းတွေထွက်ထားပါတယ်။ ဒီ AirPods Studio ဟာ AirPods Studio ဆိုတဲ့နာမည်အတိုင်း ဒီ Headphone ဟာ Apple AirPods Lineup ရဲ့တတိယမြောက် Product အနေနဲ့ထွက်လာမှာပါပဲဖြစ်ပါတယ်။ ‌AirPods Pro‌ လိုပဲသူ့မှာ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်က ဆူညံသံတွေကို လျော့ချပေးမယ့် Active Noise Cancellation ပါဝင်လာဖို့ရှိနေပါတယ်။
AirPods Studio မှာ High Quality Leather ဒါမှမဟုတ် Metal ကိုသုံးပေးလာနိုင်ပြီး သံလိုက်ဓာတ်ပါတဲ့ Ear Cups ပါဝင်လာမယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒီ Ear Cups တွေကိုပြောင်းပြန်လှည့်ပြီး အသုံးပြုလို့ရမယ်လို့ သိထားရပါသေးတယ်။ တစ်ခြား Features တွေအနေနဲ့ iOS ဒါမှမဟုတ် Mac Device တွေကနေ အသံတွေကိုထိန်းညှိနိုင်မယ့် Equalizer Edjustments Feature ပါလာနိုင်ပါတယ်။ AirPods တွေလိုပဲ နားကြပ်နဲ့ နား မကိုက်တဲ့အခါ အသိပေးမယ့် Ear Detection ဒါမှမဟုတ် Head and Neck Detection ပါလာဖို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။
လောလောဆယ်မှာတော့ ဒီ Products တွေကိုပဲမိတ်ဆက်လာဖို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ နောက်ထပ် Apple ဘက်ကနေဘယ်လို့ Products အသစ်တွေနဲ့ Surprise တိုက်သွားဦးမလဲ??
လာမယ့် နိုဝင်ဘာ ၁၀ ရက်နေ့ Event ကို ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူ စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုလိုက်ရအောင်…